ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 10/1/09 - 11/1/09
အို.. ဘလော်ဂါ အပေါင်းတို့…
DatE Wednesday, October 28, 2009 LaveL ဘလော့ဂ်၊ ဘလော်ဂါ0comments link this
အခုရက်ပိုင်း ကျွန်တော် ဖတ်နေတာက “အလွမ်းတက္ကသိုလ် ပန်းတက္ကသိုလ်” ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ် နောက်ခံ ၀တ္တတိုပေါင်းချုပ်ပါ။
မနေ့က စီတီးဟော ပင်နီစူလာ ရောက်တယ် Bi Weekly Eleven ဂျာနယ် ၀ယ်ဖတ်တယ်.
စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းတခု ဖတ်ရတယ် - “တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်” ဆိုတဲ့ ဆရာနွမ်ဂျာသိုင်း ၀တ္တု ခေါင်းစဉ် ကို စာရေးဆရာ မျိုးကိုမျိုး (တအုပ်မှ မဖတ်ဖူးပါ) က ယူသုံးပြီး နာမည်တူ ဇာတ်လမ်းကွဲ ထုတ်ပါတယ်။
မူပိုင်ခွင့် ပြသနာပေါ့ဗျာ -
အဟမ်း...သိသိကြီးနဲ့လား မသိနိုးနားလား ခိုးတာလား ယူတာလား ဘုံပိုင်လား သိချင် စိတ်ဝင်စားရင် - ဖတ်ကြပါကုန် ?????
ဆရာ မျိုးကိုမျိုးအား ဆနပ်ရှုမှ မေးမြန်းချက်များ
ဆရာ နွမ်ဂျာသိုင်း ၏ ပြောကြားချက်
DatE Sunday, October 18, 20090comments link this
Tag post by ညီညီ
မည်သူက စတင်၍ တည်ထွင်ဆန်းသစ်လိုက်သည်မသိ။
ဘလော့ဂါ မြစ်ဘေး၌ ငြိမ်းညောင်းသာယာသော အလွမ်းငွေ့ရောင်သန်း လွမ်းဖွဲ့စီးသံ နားဆင်ရင်း
အိပ်ပျော်နေသော ကျွန်တော် မောင်ဆန်းဝင်း လှုပ်နိုးခံလိုက်ရသည်။ ဘယ်သူလဲ ဆိုတော့ တစ်မြေတည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက် ဇာတိမြေ ကျောက်ပန်းတောင်းက ချစ်ညီညီ ပင်ဖြစ်တော့သည်။ ချစ်ညီညီရေ မြန်မာလို တစ်ခုပဲဖြေမယ်နော်။ ဖြေတတ်သလို ဖြေလိုက်ပီ။
1. What is your name : ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း)။
2. A four Letter Word : ဆန်းသစ်စိတ်ကူး။
3. A boy's Name : ဆန်းဝင်းမောင်ကိုကိုချစ်
4. A girl's Name : ဆန်းသော်တာလ၀န်းစံပယ်ဖြူ။
5. An occupation : ဆန်းပြားထွေလာ မြစ်ဘလော့ဂါနံဘေး ထိုင်ကာငေးလို့ လွမ်းဖွဲ့စီးသံ နားဆင်ခြင်း။
6. A color : ဆန်းလဆည်းဆာ နေချည်ဆွတ်ဖျန်း အလွမ်းငွေ့ရောင်သန်း။ (စဉ်းစားကြည့်)။
7. Something you'll wear : ဆန်းလှသည်မဟုတ် လန်းရမည်အစဉ် မေတ္တာဖြန်းသည့်နှလုံးသားဝိညဉ်။
8. A food : ဆန်းဆန်းဝင်းဝါ ငွေသော်တာ ရွှေလမင်းဆီက ရွှေလင်ဘန်းနဲ့ထမင်းဆီဆန်းတစ်ပွဲ။
9. Something found in the bathroom : ဆန်းလှသည့် ချစ်စိတ်ရယ် နတ်သမီးလေလားသူလေလား ၀ိုးတ၀ါး။
10. A place : ဆန်းပြားထွေလာ မြစ်ဘလော့ဂါနံဘေးက ထိုင်ခုံလေး။
11. A reason for being late : ဆန်းဆန်းလေးတွေ ရေးဖို့ စဉ်းစားရင် ပိုစ်မတင်ဖြစ်ပဲ နောက်ကျသွားတာပါ။
12. Something you'd shout : ဆန်းဝင်းရေ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးပါ။
13. A movie title : ဆန်းဆန်းပြားပြား ဖိုက်တင်ကား သားလာမှသိမယ် (သီဟနဲ့တင်စိုး၊ စိုးမြတ်နဲ့သူဇာ အခွေသွားငှားနေလို့)။
14. Something you drink : ဆန်းသစ်ဖို့မလိုပါဘူး သဘာဝအရသာ သစ်သီးဖျောရည်တခုခု ဆိုဖြစ်တယ်။
15. A musical group : ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း) မြူးစစ်ကယ် ဂလု။ (ဘလော့ဂါမြစ်ဘေးမှာ ဖျော်ဖြေဖူးတယ်လေ)။
16. An animal: ဆန်းဝင်း ရဲ့ အချစ်ငှက် (စံပယ်ဖြူဆိုတဲ့ကောင်မလေး ရင်ခွင်မှာနားနေတယ်)။
17. A street name : ဆန်း စကားလုံးပါတဲ့လမ်း (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း)။
18. A type of car : ဆန်းသစ် ဒီဇိုင်းနဲ့ ကုန်းပေါ် ရေပေါ် မောင်လို့ရရမယ်ပေါ့ (ဘလော့ဂါမြစ်ထဲမောင်းမလို့ပါ)။
19. The title ofasong : ဆန်းလဆည်းဆာ နေချည်ဆွတ်ဖျန်း အလွမ်းငွေ့ရောင်သန်း။ (ဒါ အရောင်နာမည်လဲရှိတယ်)။
20. A verb : ဆန်းလပမာရွှေမြန်မာဘလော့ဂါတို့လန်းကြသည်။ (သည်နဲ့ဆုံးတယ်နော်)။
DatE Thursday, October 15, 20090comments link this
အဖေ လုပ်တာ မှန်ပါတယ်
ကျွန်တော် ငယ်ကယ်က အတော်ဆိုးပါတယ်။ ရွာမှာ ငါးနှိုက်တယ် ဖားနှိုက်တယ်။ နေ့တိုင်း အဖေက ရိုက်တယ်။
မလုပ်ရလို့ တားဖြစ်ထားတဲ့ကြားက လုပ်တယ်။ ခြေသလုံးမှာလဲ အရှိုးတွေပြည့်လို့ပေါ့။ တင်ပါးမှာလဲ အဆင်းကြောင်းတွေထင်လို့။
အဖေက ရိုက်တယ် အမေက ချော့တယ်။ အမေက ပိုချစ်တယ်လို့ထင်တယ်။ အဖေ့ကို မုန်းခဲ့တယ်။ တကယ် ကျွန်တော် အဖေ့ကို မုန်းခဲ့တယ်။ အဖေ စာရင်းတွက်လို့ ရှိရင် ဘေးနားကနေ အမြောက်အလီဆိုပေးရတယ်။ မေးလိုက်တာနဲ့ တက်ခနဲ မဖြေနိုင်ရင် ဒက်ခနဲ အခေါက် ခံရတယ်။ အဖေ့ကို မုန်းတဲ့အထဲမှာ အဲဒါတွေလဲပါတယ်။
ကျွန်တော် လူပျိုပေါက် အရွယ်လောက်မှာ အိမ်က အလုပ်ကို အရမ်းလုပ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်နည်းပညာတွေနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ပစ်ချင်တယ်။ စပါးစိုက်မယ်။ ပဲစိုက်မယ်။ နှမ်းစိုက်မယ်။ ယာထဲသွားပါ။ လယ်ထဲသွားပါ။ ဒါတွေအားလုံး အဖေက ချုပ်ကိုင် ထားတယ်။ သွားဆိုသွား မသွားလို့မရဘူး။ အဖေက ဒါဆိုဒါမှ။ အဖေ့ကို စီးပွားရေး လဒ်မမြင်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ခေတ် နောက်ကျတယ်လို့ မြင်တယ်။
တကယ်တော့ သားသမီး ၇ ယောက်ကို ကျောင်းထားလို့ လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင် ကျွေးမွေး ပြုစုရတဲ့ စားရိတ်တွေ မနည်းဘူး ပေါ့။ နေဖို့ညာစာ ဆိုသလို နောင်ရေးအတွက် ကြည့်ကါ ပုံအောလို့ စီးပွား မလုပ်နိုင်တာ သားသမီးသံယောဇဉ်ကြောင့်ဆိုတာ ကျွန်တော် အရင် က မတွေးမိပါဘူး။ လူငယ်စိတ်နဲ့ ဖြစ်ချင်တာ လုပ်ချင်တာ တခုပဲတွေးမိတယ်။
အခု ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အရွယ်ရောက်လို့ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ ဆန္ဒပြည့်ဝဖို့ တောင် မနည်းလုပ်နေရတယ်။ မိသားစု တွေ တစ်ပုံကြီးနဲ့ အဖေမှာ သားသမီးအရေးထက် အဖေ့ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ချင်တာတွေ ရှိမှာပဲလို့ အခုမှ တွေးမိတယ်။ အဖေကိုယ်တိုင် ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကို စွန့်လို့ သားသမီးအပေါ် အချစ်တွေပုံခဲ့တယ်။ ငယ်ငယ်က သားကို ရိုက်ခဲ့တာ မုန်းလို့ မဟုတ်ဘူး ချစ်လို့ဆိုတာ သားနားလည်လာပါပီအဖေ။
သားသိပါပြီအဖေ။ အဖေ လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ မှန်ပါတယ် အဖေ။
DatE Monday, October 12, 2009 LaveL personal0comments link this
DatE Saturday, October 03, 20090comments link this